FET 100 taona » Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany - MADAGASIKARA
Tag Archive: FET 100 taona
Ao anatin’ny fiomanam-panahy tanteraka hiatrehana ny taon-jobily faha 100 taonan’ny FET isika ankehitriny ; antenaina fa samy manao izay azony atao ny rehetra amin’ny fampiharana ny Soridalana sy ny vokatry ny Filankevitra Nasionaly mifanandrify amin’izany. Ireto misy vaovao ifampizarana : Kongresy Eokaristika Nasionaly Nankatoavin’ireo Eveka Raiamandreny ao amin’ny Fivondronam-ben’ny Eveka eto Madagasikara fa dia hatao any …
TSATILAKRI ! Isaorana ny Tompo, isaorana ireo rayamandreny, isaorana antsika rehetra sy ireo mpanao soa fa tontosa soa aman-tsara ny fihaonam-be nasiônalin’ny Afafi-Fet ho famaranana ireo taon-jôbily maro sosona. Ho entina miandalana eto ihany ireo tranga nisy tamin’iny fihaonana iny. Ho fisantarana ny fifampizaràna dia indreto misy sary vitsivitsy nalaina tamin’ny sorona masina famaranana. Ankasitrahana …
Tags: FET 100 taona, Taon-jôbily
Akon’ny famaranana ny faha100 taonan’ny FET tany Rôma
Isaorana ny Tompo fa vita soa aman-tsara ny famaranana ny faha 100 taonan’ny FET tany Rôma. 10 ny solotenatsika Malagasy niatrika tany. Maro ny fifampizaràna tiana hatao ary efa eo am-pandrindrana izany ny foibe nasiônaly amin’izao fotoana izao. Misy horonan-tsary telo kosa anefa efa azo atolotra antsika : Famintinana ny fihaonana Ny 4 – 10 …
AFAFI Efa maro amintsika no tsy mahandry ny fotoan-dehibe hamaranana ireo taon-jôbily eo anivon’ny AFAFI-FET, koa inoanay fa efa samy miomana amin’izany avokoa ny rehetra. Toy izao indray ary ireo toromarika hifampizarana mba hahafahana miatrika tsara ny Famaranana Nasiônaly izay hatao eto Antananarivo ny 06-07-08 novambra 2015 : 1/ Noho ny fangatahan’ny maro dia ahemotra ny …
Ndao hiombom-bavaka !
“Mba ho ao aminareo ny fifaliako” (Jn 15, 11) Manasa antsika hiombom-bavaka ho fanirahana ireo solotena hiatrika ny famaranana ny taon-jôbily any Rôma. Hankalazaina ao amin’ny Episcopat Antanimena ny sorona masina ny sabotsy 01 aogositra amin’ny 9 ora maraina. Misaotra amin’ny fiombonam-bavaka !
Mankalaza ny faha 100 taonany ny FET. Hahafahana manomana ny 100 taona manaraka dia tsara ny mandalina ireo tranga niainan’ity fivondronana mamintsika loatra ity. Tsidiho ny http://mej2015.com/html/Francese/histoire.html. FET, miombom-po amin’ny Ray masina Iraka ampanaovin’ny Ray masina ho antsika FET ny fitondrana am-bavaka ireo fanamby atrehin’ny Fiangonana sy Izao tontolo izao. Tsapa fa teny am-piandohana dia …
Famaranana taon-jaobily : efa nisoratra anarana ianao ?
Efa nanomboka ny voalohan’ny volana martsa teo ny fisoratana anarana amin’ny famaranana ny taon-jaobily izay hatao eto Antanananarivo ny 6 – 7 – 8 novambra 2015. Hifarana ny 31 jolay 2015 izany ka efa nisoratra anarana ianao ? Ireo tsara ho fantatra Afaka mandray anjara ny Afafi sy ny FET manerana ny nosy. Vakio eto …
Ry FET, areheto ny afon’ny Hafaliana !
Hiran'ny FET, Vaovao
Anisan’ny ahafatarantsika ny MEJ Liban ilay hira hoe “Je vis le MEJ” : hita ao amin’ny www.facebook.com sy www.youtube.com Amin’izao fankalazana ny taon-jaobily izao dia namorona ny “Le MEJ en feu de joie” ihany koa i Rolland Mattar. Mampiavaka ity hira ity ny fisian’ny andininy amin’ny tenim-pirenena efatra : frantsay, espaniôla, anglisy ary italianina. Jereo ary …
Mandray ny aina, mizara ny fiainana
Indro atolotra antsika indray ny fanomanam-panahy iainantsika ny taon-jôbily. Sady ankatoky ny fankalazana ny Sakramenta Masina isika no ao anatin’ny Volan’ny Fo Masin’i Jesoa rahateo, koa miarahaba atsinka rehetra fa andron’ny AFAFI-FET maneran-tany ny Alahadin’ny Sakramenta Masina. Ny Aina sy Famonjena ny Fivavahana, fiainam-panahy maha iraka iveloman’ny FET « Mangataka aminareo aho, ry rahalahy, noho …
FET 100 taona : ianaro ny dihy mirindra miaraka amin’ny hira faneva !
TSATILAKRI ! Namorona dihy mirindra miaraka amin’ny hira “Deep in my heart” ny FET any Italia. Afaka mianatra izany dihy izany isika miaraka amin’ity horonan-tsary ity. Ifampizarao amin’ny ekipa rehetra ! AFITEMA